एमबी 2016 नोभेम्बर - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > जे। Tkach देखि कर्मचारी पत्र > MB 2016 नोभेम्बर
एक गोप्य मिशनमा
मलाई चिन्ने सबैले जान्दछन् कि म शर्लक होम्सको कल्ट फिगरको महान प्रशंसक हुँ। मसँग अधिक होम्स फ्यान लेखहरू छन् म आफैले स्वीकार गर्न चाहानुहुन्न। म लन्डनमा २२१ बी बेकर स्ट्रिटमा शेरलॉक होम्स संग्रहालय धेरै चोटि भ्रमण गरिसकें। र पक्कै पनि म यो रोचक चरित्र को बारे मा बनेको थिए भनेर धेरै फिल्महरु हेर्न चाहन्छु। म विशेष गरी पछिल्लो बीबीसी निर्माणको नयाँ एपिसोडहरूको प्रतिक्षा गर्दैछु, जहाँ फिल्म स्टार बेनेडिक्ट कम्बरब्याच प्रसिद्ध जासूसको भूमिका निर्वाह गर्दै छन्, लेखक सर आर्थर कोनन डोयलले उपन्यासकार।
उपन्यासहरूको विस्तृत श्रृंखलाको पहिलो कथा १ 1887 मा प्रकाशित भयो। अर्थात् - शर्लक होम्स - सबैभन्दा गाह्रो अवस्थामा को लागी मास्टर जासूस करीव १ 130० बर्ष को लागी आएको छ। यदि तपाईंले टिभी श्रृ series्खला देख्नु भएको छैन र सर आर्थर कोनन डोएलको कुनै किताब पढ्नुभएको छैन भने पनि, शर्लम होम्सको बारेमा तपाईंलाई कुनै दुई वा दुई चीज थाहा छ भनेर म शर्त लगाउँछु। किनभने तपाईंलाई शायद थाँहा छ कि ऊ जासूस हो र उसले रहस्यमय केसहरू सुल्झाउछ धेरैसाथ लागू गरिएको डिडक्टिभ पद्धतिको साथ। अवश्य पनि तपाईलाई उनका साथी डा। वाटसन, जो असंख्य केसहरूमा सहयोगी छ र अक्सर क्रॉनरको भूमिका लिन्छ। तपाईं सायद आफ्नो क्लासिक पाइप र शिकारीको टोपीको बारेमा सोच्नुहुन्छ।
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ लगातार नयाँ रेडियो, फिल्म वा टिभी निर्माणहरू शर्लक होम्सको साथ छन्। यस चरित्रको भूमिकाको लामो इतिहासभरि, धेरै कलाकारहरूले यस मनमोहक व्यक्तित्वको हाम्रो विचारलाई आकार दिएका छन्। शेरलकको भूमिका रोबर्ट डोने जूनियर, जेरेमी ब्रेट, पीटर कुशिंग, ओर्सन वेल्स, बेसिल रथबोन र अन्य धेरै जस्ता अभिनेताहरूले खेलेका छन्। प्रत्येक अवतारले थोरै परिमार्जन, नयाँ परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्‍यो, जसले हामीलाई शर्लक होम्सको व्यक्तिको अझ पूर्ण समझ दिन्छ।
यो मलाई बाइबल मा देखेको कुरा को याद दिलाउँछ - यो सुसमाचार सद्भाव भनिन्छ। बाइबल मा चार सुसमाचारहरु छन्। प्रत्येक एक फरक लेखक द्वारा लिखित - मत्ती, मार्क, लूका, र जोन। येशू को माध्यम बाट, यी मानिसहरु को जीवन बिल्कुल परिवर्तन भएको थियो (लुका संग, जो उहाँलाई कहिल्यै भेटेनन्) र सबैले येशूको जीवन मा घटनाहरु को निकटता मा आफ्नो खाता लेखे। जे होस्, चार सुसमाचार लेखकहरु मध्ये प्रत्येक को आफ्नै फोकस, एक फरक परिप्रेक्ष्य थियो, र उनीहरुले बिभिन्न कथाहरु पनि साझा गरे जसले हामीलाई येशू को जीवन मा प्रकाश बसाउन मद्दत गर्दछ। Gospels, जे होस्, हाम्रो प्रभु को बारे मा विरोधाभासी कथनहरु शामिल छैन; प्रत्येक रिपोर्ट अरु को पूरक हो, उनीहरु एक अर्का को समर्थन र एक अर्का संग मेल खान्छन्।
मानिसहरू येशूको बारेमा मौलिक आधार मा फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ; तिनीहरू मध्ये केही पूर्ण रूपमा परस्पर विशेष छन्। तर सत्यले त्यस्तो विवादलाई जित्न सक्छ। २० औं शताब्दीका धर्मविद् कार्ल बार्थले आफ्नो मुख्य काम चर्च डोग्यामेटिक्सका लागि परिचित थिए र उनीले शार्लक होम्सको केसजस्ता लेखहरू जाँचे - एउटा हातमा पाइप र अर्कोमा पेन्सिल। बार्थले बाइबललाई सोधे: हामी कसरी भगवानलाई बुझ्न सक्छौं? उनले यस्तो निष्कर्ष निकाले कि परमेश्वरले उत्तर दिइसक्नुभएको छ - येशू ख्रीष्टमार्फत, मानिस बनेको वचन। येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो भाइ, अधिवक्ता, प्रभु र उद्धारक हुनुहुन्छ - र आफ्नो अवतार मार्फत हामीलाई पितामा दर्ता गर्नुभयो, जसले हामीलाई उहाँको प्रेम र अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ।
बिभिन्न कलाकारहरूले हामीलाई प्रख्यात जासूस शेरलॉक होम्सको तिनीहरूको चित्र प्रस्तुत गरेका छन्, कोहीले उनको विश्लेषणात्मक कौशल, अरुलाई उनको बुद्धिमत्ता, र अझै अरूले उसको व्यवहारिक व्यवहारमा जोड दिएका छन्। कथाको प्रत्येक संस्करण, प्रत्येक प्रदर्शन, यो फिल्ममा वा रेडियोमा होस्, हामीलाई होम्सको एक वा अर्को विशेषताको महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ धेरै अनुकूलनहरू र संस्करणहरू छन्, तर ती सबै मुख्य चरित्र, सर आर्थर कोनन डोयलमा फर्कन्छन्, जुन १०० वर्ष भन्दा अघि सिर्जना गरिएको थियो। बाइबलमा चारओटा सुसमाचारका पुस्तकहरू र अरू धेरै पुस्तकहरू छन् जुन एक व्यक्ति, हाम्रा प्रभु, येशूमा केन्द्रित छन्। काल्पनिक होम्स जस्तो नभई, उहाँ वास्तविक जीवनमा बस्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। बिभिन्न पुस्तकहरू हाम्रो लागि लेखिएका छन् ताकि हामी यसको प्रकृति र सन्देशको विभिन्न आयामहरू बुझ्न सकौं।
जब येशूको सन्देशको कुरा आउँछ, यो मेरो हातमा पपकोर्नको झोला लिएर टिभीको कुर्सीमा झुकाई र भर्खरको शर्लक फिल्म हेर्नु भन्दा धेरै फरक छ। किनभने हामीलाई केवल दर्शकहरू भन्दा बढि हुन बोलाइएको छ। हामी हाम्रो आर्मचेयरमा पछाडि बस्नुहुन्न र परमेश्वरको राज्य फैलिदै गरेको हेर्नु हुँदैन। हामीले एउटा गोप्य कुराको पर्दाफास गर्नु आवश्यक पर्दैन, तर हामी आफै पनि यसको अंश बन्नु आवश्यक छ! हामी हाम्रो उद्धारको रहस्यमा हिड्न चाहन्छौं, जुन मार्ग हामीलाई देखाइएको छ र मुक्तिको लागि डोर्याउँछ। डा। जस्तो वाटसन हामी आश्चर्यचकित हुन्छौं र ख्रीष्टको शक्तिको नजिकको साक्षी दिन्छौं। हामी वास्तवमा उहाँसँग यति नजिक छौं किनकि हामी परमेश्वरको परिवारमा धर्मपुत्र भएकाछौं किनकि येशूको उद्धार कार्य र उहाँको आत्माको बासस्थानलाई धन्यवाद दिन्छौं।
GCI / WKG मा हामी प्रभु येशू प्रभुमा विश्वास गर्दछौं जुन पिताले जन्मनु भएको थियो। हामी धन्यवादी छौं कि चार सुसमाचारका लेखकहरूद्वारा परमेश्वरले पृथ्वीमा येशूको जीवनीको विभिन्न पक्षहरू देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरले येशूलाई पठाउनुभयो र हामीलाई प्रेरित धर्मशास्त्र पनि दिनुभयो, जसमार्फत हामी उसको जीवन, उनको मृत्यु, उनको पुनरुत्थान र उहाँको अद्भुत शासनको बारेमा सबै महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न सक्छौं। इसाई भएको नाताले हामीलाई निष्क्रिय रूपमा हेर्नको लागि आह्वान गरिएको छैन, तर सारा संसारभर येशूको व्यक्तिको बारेमा शुभ समाचारको घोषणामा संलग्न छ - साथै घटनामा पनि।
हामी मार्ग, सत्य र जीवनको उत्सव मनाउँछौं,